Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Onye nnọchi anya Canada dị elu na Jamaica na Mịnịsta na -ahụ maka njem
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Nweta nkwado na Jamaica
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, nke a hụrụ n'aka nri na foto a, na -esonye na Kọmịshọna Kasị Elu Canada na Jamaica, Onye isi ala Emina Tudakovic (n'etiti) na odeakwụkwọ na -adịgide adịgide na Ministry of Tourism, Jennifer Griffith, ka ha na -akwụsịtụ anya m n'oge nkwanye ugwu na nso nso a. Onye isi ala kpọrọ oku n'ụlọ ọrụ New Kingston nke Ozi.
N'elu tebụl maka mkparịta ụka bụ ụzọ Jamaica na Canada ga -esi gaa n'ihu na -arụkọ ọrụ na mpaghara dịka njem.
Ngalaba njem na -enye injin itolite maka akụ na ụba Jamaica.
Mmekọrịta siri ike n'etiti ndị ọrụ ọha na nkeonwe dị mkpa iji nweta ebumnuche ezubere, nke dị mkpa na atụmatụ nke Mịnịsta na -ahụ maka njem.
Ha tinyere aka na mkparịta ụka sara mbara banyere mgbanwe na ụlọ ọrụ njem na-esochi oria ojoo COVID-19, yana ụzọ Jamaica na Canada ga-esi gaa n'ihu na-arụkọ ọrụ na mpaghara dịka njem.
The Jamaica Ozi nke njem ụlọ ọrụ ya nọ na ebumnuche ịkwalite ma gbanwee ngwaahịa njem nlegharị anya nke Jamaica, ebe ha na -ahụ na uru ndị na -esite na mpaghara njem na -abawanye maka ndị Jamaica niile. Maka nke a, o tinyela atumatu na atụmatụ ga -enye ohere maka njem nlegharị anya dị ka injin nke uto akụnụba Jamaica. Ministri a na -agbasi mbọ ike ịhụ na mpaghara ndị njem na -enye nkwado zuru oke maka mmepe akụ na ụba Jamaica n'ihi nnukwu ego ha nwere.